Marek Hamsik Hooyo Sheeko Xogta Xogta Aan Laheyn
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Marek Hamsik Hooyo Sheeko Xogta Xogta Aan Laheyn
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'nickname'Marekiaro". Munaasabada Marek Hamsik Hore ee Haweenka iyo Xaqiiqooyinka Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu gool dhalin karo oo caawinaayo awoodiisa, lakiin dhowr ka mid ah ayaa ka fikiraya Marek Hamsik's Bio oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Marek Hamsik Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahin ku saabsan taariikhda-Hore iyo Qoyska
Marek Hamsik wuxuu ku dhashay maalintii 27th July Juunyo ee Banska Bystrica, Slovakia. Waxa uu ku dhashay hooyadiis, Renata Hamsik iyo aabihiis Richard Hamsik.
Horumarinta Banska Bystrica (sawirka hoose), oo ah magaaladii ugu caansanaa ee muhiimadda miinada iyo dhismayaasha taariikhiga ah, dhallinyarada Oblak ayaa ku hareeraysan jacaylka uu ka leeyahay qoyskiisa ciyaaraha isboortiga oo ka caawiyay inuu u sii wato marinkiisii ​​hore ee nolosha.
Hamsik's Hooyo wuxuu ahaa hal cayaaryahan kubadda gacanta ah halka uu aabihiis ahaa kabtanka kooxda reer Slovakia ee 5-kooxood xilliga dhalashada kubada cagta. Si aad u dhisto qoyska cayaaraha, walaashii Hamsik, Michaela wuxuu ahaa ciyaaryahan kubbadda gacanta ah oo u ciyaaray kooxdooda, Banská Bystrica.
Hamsik wuxuu ahaa mid dabiici ah oo udhashay Hamsik kaasoo saameyn badan u yeeshay aabihiis si uu u tixgeliyo xirfad ciyaareed kubada cagta ah. Hamsik ayaa ku soo laabtay tababarkiisii ​​ugu weynaa ee xirfad-yaqaanimo si aan habooneyn isaga oo ku biiray koox yar oo dhalinyaro ah, Jupie Podlavice halkii uu ka bilaabi lahaa koox maxali ah oo degaanka ah, Dukla Banská Bystrica.
Marek Hamsik Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahin ku saabsan taariikhda-Dhismaha Xirfadaha
Inuu u ciyaaro Jupie Podlavice ayaa awood u siiyay Hamsik inuu u baahan yahay inuu si fiican ugu ciyaaro kooxo waaweyn oo waaweyn oo ay ka mid yihiin Slovan Bratislava, koox Hamsik ah oo u soo baxday 2002 isagoo ku jira duruufo ficil ah sida uu dib ugu soo celin doono sanado ka dib:
'Wax walba waxaan u leeyahay waalidkeyga. Inkastoo aan ahayn qoys qani ah, waalidkay ayaa dhereray si ay i taageeraan oo ay ku jirto iibinta gaari kaliya oo aan helnay si aan ugu biiri lahaa Slovan Bratislava markii aan da'yahay 14.
Hamsik ma ahan mid ka mid ah inuu ka dhigo iftiinka waalidiintiisa sida uu ku sameeyay awoodiisii ​​ugu badneyd ee lix kulan uu u saftay Slovan ka hor inta uusan ku biirin Club Brescia ee 2004.
Hamsik ayaa ka soo bilaabay kooxda heysata horyaalka ee 19, Hamsik ayaa ka soo laabtay kulankoodii ugu horeeyay ee horyaalka Serie A ee 2005, lakiin waxa uu ku guuleystay Brescia iyadoo Brescia ay ku guuldareysatay inay ka fogaato inay ka tagto sannadkan.
Si kastaba ha ahaatee, Hamsik ayaa sii waday qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa ee Napoli u soo bandhigtay ka dib markii uu ka soo muuqday 10 kulan oo Serie A ah oo uu saftay.
Marek Hamsik Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahin ku saabsan taariikhda-Kacsanow inaad ku guulaysato
Hamsik ayaa Napoli ku hogaamineysay dareen fiican, ka dib markii uu shabaqa soo taabtay kulankiisii ​​ugu horeysay ee uu ka horyimid Cesena ee Coppa Italia. Seddexda xilli ciyaareed ee soo socota ee Napoli oo kale waxa ay u aragtay inuu goolal u dhaliyo Maradona ayaa ah rikoorka ugu goolasha badan kooxda.
Hamsik ma aysan dhicin ka hor inta uusan Hamsik ku guuleysan abaalmarinta ciyaaryahanka da 'yar ee ugu fiican Serie A ee loo yaqaan' Oscar del Calcio 'bishii Janaayo. Abaalmarinta ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee la siiyo ciyaartoy aan laheyn xididada Talyaaniga. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Marek Hamsik Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahin ku saabsan taariikhda-Nolosha Xiriirka
Mid ka mid ah kuwa ka fikiraya qaababka soo noqnoqda ee xirfadaha iyo xulashooyinka xiriirka ee qoysaska ku jira ma noqon doono mid aad uga baraneysa nolosha Hamsik oo xannibay waddooyinka aabihiis (oo ah kabtankii hore) kubadda cagta iyo guursashada ciyaaryahan kubbadda gacanta isboorti isku mid ah oo hooyadii Hamsik ay si firfircoon uga qayb qaadatay).
Hamsik wuxuu ku jiray xiriir dheer oo lala yeeshay saaxiibtiis ama xishoodka xaaskiisa, Martina Franova.
Martina Franova waxay ahayd ciyaaryahankii kubbadda gacanta ahaa ee u ciyaarayay kooxdooda, Banská Bystrica oo ay weheliso walaashii Hamsik, Michaela. Xidhiidhka lamaanaha ayaa yimid markii uu Hamsik ku sugnaa Brescia isla markaana wuxuu tan iyo markii ugu dambeysay uu ubaxday.
Labada lamaane ee sanooyin ah ka hor intaysan guursanin 4th ee July 2014.
Isbahaysigoodu wuxuu ku baraarugsan yahay labo wiil oo Christian iyo Lucas (oo u dhashay 2010 iyo 2012) iyo sidoo kale gabadh Melissa, oo dhashay Dheeman 2017.
Iyadoo Labada Wiil ee Horyaalka ah ay ku bilaabeen xirfadooda kubada cagta ee akadeemiyada ee ku xiran Udinese, taageerayaasha ma sugi karaan inay arkaan hadii Melissa uu sii wadi doono qaabka isboortiga ee qoyskiisa isagoo ciyaaraya kubbadda gacanta.
Marek Hamsik Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahin ku saabsan taariikhda-Dhibaatooyinka kala duwan
Bishii Nofeembar 2011, xaaska uurka leh ee Hamsik, Martina Franova, ayaa lagu garaacay qoryaha, lagana tuuray alaabteeda waxaana sidoo kale ka tagay Naples ah ka dib markii tuugo ka tagay in BMW ay ahayd fuushan.
Dhacdadan oo dhacday saacado ka hor inta aysan Napoli la ciyaarin Champions League oo ay la ciyaareen Manchester City wax dhibaato ah ma aysan qabin Hamsik oo ciyaaray kulankan.
Hore u sii gudbi 2013, Hamsik ayaa la dhacay halka ay ku soo laabaneyso ka dib markii Napoli ay barbaro goolal la'aan ah la gashay kooxda Sampdoria. Tuhmanayaasha ayaa la sheegay in ay joojiyeen oo ay burburiyeen muraayadda Hamsik gaariga ka hor inta aysan calaamad u dhigin wajigiisa.
Hamsik ayaa ka tagay iyada oo aan wax doorasho ah laakiin ay waajib ku tahay inay dalabaadkooda dalbadaan markii ay ka dhigeen watch cajaladiisa ka mid ah waxyaabaha kale ee qiimaha leh.
Marek Hamsik Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahin ku saabsan taariikhda-Xoriyad u noqo Club
Iyadoo ciyaartoy badan oo ay ka mid yihiin Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi iyo Gonzalo Higuain ay ka tageen 'kooxaha waaweyn', Hamsik ayaa go'aansaday inuu sii joogo inkastoo ay kooxo Ingariis ah u soo bandhigeen isaga iyo dhacdooyin ay ka soo horjeedaan isaga iyo xaaskiisa uurka leh. Natiijada, Hamsik waxaa loo dabaaldagayaa halyeeyga casriga ah ee Napoli ka dib markii Diego Maradona oo rikoorkiisa goolasha ku dhaliyay Napoli ay ka sarreeyeen da 'yarta daacad u ah.
Marek Hamsik Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahin ku saabsan taariikhda-Maaha kaliya Lambarka Shirt
Nambarka shaxda ee 17 wuxuu noqday mid muhiim u ah Hamsik oo u muuqda inuu xiran yahay qalabka loo yaqaan 'lambarka' inta uu u ciyaarayo Napoli iyo xulka qaranka Slovakia. Sida laga soo xigtay kabtanka, lambarka dambe ee lambarka 17 wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah taariikhda dhalashada iyo waqtiga, xaqiiqda oo uu shaaca ka qaaday markii wareysi lala yeeshay wariyeyaasha.
'Waxaan ku dhashay 27th ee bisha toddobaad (July) 1987, at 7pm,'
Marek Hamsik Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahin ku saabsan taariikhda-Sababaha ka dambeeya Nickname
Hamsik's Nickname, 'Marekiaro' ayaa waxaa laga jaray magaciisa hore 'Marke' halka erayada kale ee "kiaro" ay ku faanto biyaha badda ee ku hareeraysan Napoli kuwaas oo Neapolitans aad u jecel yihiin.
Marek Hamsik Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahin ku saabsan taariikhda-Xaqiiqooyinka shakhsiga
Dhinaca ciyaaraha, waxaa loo qeexay in uu noqdo mid degdeg ah, firfircoon, shaqeynaya, iyo xeelad xeel dheer oo khibrad leh, kaasoo awood u leh inuu ka ciyaaro boosas badan oo weerar ah.
Awoodiisa, hal-abuurkiisa iyo gaar ahaan xirfadihiisa hoggaanka ayaa u arka inuu yahay kabtanka kooxda Napoli ee Napoli iyo sidoo kale kabtanka xulka qaranka Slovakia.
Intaas waxaa sii dheer, sir ahaanshihiisa niyadjabkiisa oo ay weheliso jilitaanka rikoodhka ah ee raacaya isaga oo raacaya sifooyinka isaga oo ka dhex muuqday ciyaartoy kale isla markaana wuxuu u muuqday "meel aan la dhigin" meel kasta oo uu tago.
Hantida FACT: Waad mahadsantihiin akhrinta Marek Hamsík Childhood Story plus iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
sano ka hor 2
Magaca naaneyska "Marekiaro" waa inuu sameeyo qayb yar oo ka mid ah magaalada Naples oo la yiraahdo Marechiaro. Waa meel yar oo biyo ah oo laga arki karo magaalada oo dhan Naples, oo ay ku jiraan Mt. Vesuvius. Waa qurux badan, Marek Hamsik ayaa la siiyay naaneyska "Marekiaro" sababtoo ah sannado badan ayuu calaamad u ahaa magaaladeena iyo kooxda. Naanaysta noocan oo kale ah waa amaan weyn, Hamsik waa ogyahay oo ku faraxsan. Wixii macluumaad dheeraad ah, cilmi baarista Marechiaro, Posillipo, Naples.